I-Apple ixabise imeko apho inkampani ihlawula irhafu kwilizwe apho yenza khona ukuthengisa | Ndisuka mac
I-Apple ixabisa imeko apho inkampani ihlawula irhafu kwilizwe apho yenza khona ukuthengisa
Elinye lamanqaku aphikisayo, hayi i-Apple kuphela, kodwa zonke iinkampani zobuchwephesha ezinokubaluleka okubalulekileyo kwihlabathi liphela. Ezi nkampani zifaka ikomkhulu labo lezemali kwilizwe le-European Union apho ukuhlawulwa kweerhafu kwintengiso yeemveliso kusezantsi. Ke ngoko, Nokuba sithenga iMac eSpain, iApple izakuhlawula uninzi lweerhafu zayo, kule meko eIreland, apho inkampani igcina ikomkhulu labo lerhafu eYurophu. Izigwebo ezahlukeneyo zinyanzela ezi nkampani ukuba zingene kwinxalenye eziyigcinileyo ngokuhlawula irhafu kula mazwe.
UTim Cook no-Emmanuel Macron, badibene kwimpelaveki edlulileyo eFrance, bethatha ithuba lotyelelo lukaCook kubanikezeli ngeenkonzo ezininzi beApple. UMacron uxelele uCook ukuba iApple kufuneka ihlawule irhafu kwilizwe apho ithengisa khona iimveliso zayo.
Iofisi kaMacron ithe aba babini ngekhe bathethe ngezimpikiswano zerhafu edlulileyo, kodwa uCook wamkele ukuba imithetho yerhafu kwihlabathi liphela iyatshintsha ukuze iinkampani zihlawule irhafu apho kuveliswa khona imali.
Kuthiwa i-Apple ihlawula e-Ireland kuphela i-2.5% yenzuzo efunyenwe kwintengiso. Intlawulo ebekwe yi-EU kwi-Apple ifikelela kwizigidi ezili-13 zeedola. Ngo-2015 i-Itali yamangalela inkampani ye-apile, eyalelwa ukuba ihlawule i-318 yezigidi zeerhafu.
Kule okanye ezinye iimbambano ezivulekileyo, I-Apple iyakuxabisa ukutshintsha isicwangciso sayo kunye nokuhlawula irhafu kwilizwe lokuthengisa iimveliso zalo. Enye into kukuba ithethathethana nolawulo olwahlukeneyo, unyango oluthile olusekwe kutyalo-mali olwenzileyo.
Oku akuthethi ukuba iApple iyalahla ukuthanda kwayo ngoku ngokunxulumene nemfuno ye-EU, ukuze inkampani ihlengahlengise iirhafu zayo ezihlawulwa kuphela eIreland, ngonyango olukhethiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ixabisa imeko apho inkampani ihlawula irhafu kwilizwe apho yenza khona ukuthengisa
I-Apple ivusa uthotho lukaSteven Spielberg "lweeNdaba eziMangalisayo"
Phucula iMac yakho ngale pakethi yezicelo kwaye ugcine amakhulu eeyuro